သာ. ကောင်း၏သင့်ရည်မှန်းချက်များရောက်ရန်အဆင့် မှစ. ကိုယ်တော်၏အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင်
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်: ယခုသင်သည်အောင်မြင်မှုရရန်စွမ်းရည်နေကြောင်း, အရေးပါသောအချက်နေဆဲရှိသေး၏။
သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်မြှင်; အဲဒါကိုသတိမမူခံရဖို့မခြေလှမ်းပါ! အမှန်မှာကအစဉ်အမြဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်, ဤစုပြုံနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နှင့်သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထိခိုက်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့အရာဖြစ်ကြ၏။ ဘယ်သူမှဘရိတ်ခံရဖို့လိုသည်။3မိ၏ဤဗွီဒီယိုအတို Watch နှင့်သင့်အောင်မြင်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အကြံပေးချက်များရှာဖွေတွေ့ရှိ!
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသင်ရုံ5အချက်များအတွက်အတွေးအခေါ်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့ရန်သင့်အောင်မြင်မှုအရှိန်တိုးမြှင့်ကူညီရန် ... အပေါင်းတို့နှင့်ကွောငျးတှေ့လိမျ့မညျ:
1) အဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားé : ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားကအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်, အရေးကြီးပါသည်။
2) ကတိသစ္စာ : အဆိုပါရက်အတွင်းသာ 24 နာရီများမှာတစ်ခုကိုစတင်ရန်အချိန်ပဲ!
3) ပတ်ဝန်းကျင် : တစ်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးအောင်မြင်စေတယ်။
4) flexible သာ. မြတ်အောင်မြင်မှုဝေဖန်မှုများကိုလက်ခံသည်အဆုံးစွန်သောသငျသညျကျောလမ်းကြောင်းအပေါ်အရကူညီပေးနိုင်သည်။
5) ကဆက်ဆံရေးဟာခန္ဓာကိုယ် / စိတ် : ဒါဟာကောင်းစွာစိတ်ကိုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ချိတ်ဆက်နေကြသည်ဟုလူသိများသည်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောကုစားတည်ရှိစိတ်ချပါ!
ကို set up ဤရိုးရှင်းသောအကြံပေးချက်များနှင့်အတူ, သငျသညျလိမ့်မည်
သာ. ကောင်း၏သင့်ရည်မှန်းချက်များရောက်ရန်အဆင့် မှစ. ကိုယ်တော်၏အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင်။ မေလ 12th, 2018Tranquillus
လွန်ခဲ့သောExcel ကိုသင့်ရဲ့ Productivity သိကောင်းစရာများအပိုင်း-တိုးမြှင်
အောက်ပါမြန်ပြီးတော့အကျပ်အတည်းကိုဒူပင်ပန်းပြင်းထန်တဲ့ မှစ. သာ. ကောင်း၏သင်ဟာ-ကိုသတိရပါ-Exit ကိုလေ့လာပါ